ေနာက္ခံသမိုင္း – UFES
Present Collaborative Activities
RECTOR OF UFES
၁၉၂၃ ခုနှစ် – မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောပညာသင်ကြားခြင်းကို ရန်ကုန်ရှိ သစ်တောပညာကျောင်း (School of Forestry)တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပစာသိပ္ပံ (I.Sc) (ခ)အောင်မြင်ပြီးသူများ တက်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၂)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားဦးရေမှာ (၆ – ၁၀) ဦး ဖြစ်ပြီး ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့မှာ သိပ္ပံ(သစ်တော) B.Sc.(Forestry)ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၂၆ ခုနှစ် – ဥပစာသိပ္ပံ (I.Sc) (ခ) အောင်မြင်ပြီးသူများ တက်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး သင်တန်းကာလကို (၃) နှစ်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသားဦးရေမှာ (၆ – ၁၀) ဦး ဖြစ်ပြီးပေးအပ်သည့်ဘွဲ့မှာ သိပ္ပံ(သစ်တော) B.Sc.(Forestry) ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၃၄-၁၃၄၉ ခုနှစ် – ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းကြောင့် သစ်တောပညာကျောင်းကို ပိတ်ထားခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် – ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ သိပ္ပံပညာမဟာဌာန (Faculty of Science) အောက်တွင် သစ်တောပညာဌာန (Department of Forestry) ကို ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဥပစာသိပ္ပံ (I.Sc) (ခ)အောင်မြင်ပြီးသူများ တက်ရောက်ခွင့်ပြုပြီး သင်တန်းကာလကို (၃) နှစ်သို့တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည် ။ သင်တန်းသားဦးရေမှာ (၆ – ၁၀) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်ကာ ၂၅ မိုင် လမ်းလျှောက်စစ်ဆေးပြီး ဆေးစစ်ခြင်းအောင်မြင်သူများ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပါသည်။ ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့မှာ သိပ္ပံ (သစ်တော) B.Sc. (Forestry) ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် – ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အောက်တွင်သစ်တောပညာမဟာဌာန (Faculty of Forestry) သို့ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် – သစ်တောပညာသင်ကြားခြင်း စနစ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီး သင်ကြားမှုသင်တန်းနှစ်ကို (၆) နှစ်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသားဦးရေကို (၅၀) ဦးသို့ တိုးမြှင့်ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ဝင်ခွင့်စိစစ်ရေးအဖွဲ့က စိစစ်ရွေးချယ်ပြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကို သိပ္ပံသာသာတွဲနှင့် အောင်မြင်သူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်ကာ (၂၅) မိုင် လမ်းလျှောက်စစ်ဆေးပြီး ဆေးစစ်ခြင်းအောင်မြင်သူများ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပါသည်။ ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့မှာ သိပ္ပံ (သစ်တော) B.Sc. (Forestry) ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ် – လမ်းလျှောက်စစ်ဆေးခြင်းကို မိုင် (၂၀) သို့ လျှော့ချခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ် – သစ်တောပညာဌာန (Department of Forestry) ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ် – ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ် (Institute of Forestry) အဖြစ် သီးခြားစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်အောက်မှ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊သစ်တောဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် – ခေါ်ယူသူအရေအတွက်၏ (၂၅ )ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကျောင်းသူ (၁၂) ဦးအား ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင်လက်ခံ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် – သင်တန်းကာလကို (၆) နှစ်မှ (၅) နှစ်သို့ လျှော့ချခဲ့ပြီး ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် စာသင်နှစ်ဝက်နှစ်ခု ခွဲခြားသင်ကြားသည့်စနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် – သစ်တောတက္ကသိုလ် (Institute of Forestry) ကို သစ်တောတက္ကသိုလ် (University of Forestry) ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် – သင်တန်းသားဦးရေကို (၁၀၀) ဦးသို့ တိုးမြှင့်ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ရေဆင်းနယ်မြေ တက္ကသိုလ်များ၏ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ မိမိတက္ကသိုလ်အစီအစဉ်ဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး အသက် (၁၈) နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ရန် ကြေငြာ၍ခေါ်ယူခြင်း၊ ဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်း၊ အောင်မြင်သူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ အောင်မြင်သူများကို မိုင် (၂၀) လမ်းလျှောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ အောင်မြင်လျှင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရပါသည်။ ကျောင်းသူဦးရေကို ခေါ်ယူသူအရေအတွက်၏ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လျှော့ချခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ရရှိခဲ့သောအမှတ်သည် အဓိကအဆုံးအဖြတ်ပေးသော အရာမဟုတ်ပါ။
၂၀၀၇ ခုနှစ် – သင်တန်းသာဦးရေကို (၂၀၀) ဦးသို့ တိုးမြှင့်ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် – သင်တန်းသားဦးရေကို (၁၀၀) ဦးသို့ ပြန်လည်လျှော့ချ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် – ဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်း၊ လူတွေ့မေးဖြေစစ်ဆေးခြင်းများ မပြုလုပ်တော့ပါ။ အသက်ကန့်သတ်ချက်လည်း မရှိတော့ပါ။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စုစုပေါင်းရမှတ် (၃၆၀) နှင့်အထက် ရရှိသူများ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက်အမှ အမှတ်အများဆုံးရရှိသူများကို မိုင် (၂၀) လမ်းလျှောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းပြုလုပ်၍ အောင်မြင်လျှင် တက်ရောက်ခွင့်ရပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် – အောက်တိုဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ် (University of Forestry) ကို သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် (University of Forestry and Environmental Science) ဟု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် – မဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့၍ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန (ယခု သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန) လက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများမှ သိပ္ပံ(သစ်တောပညာ)ဘွဲ့ ရရှိပြီး သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများအား လျှောက်ထားတက်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။ ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့များမှာ မဟာသိပ္ပံ(သစ်တောပညာ) M.Sc.(Forestry) နှင့် မဟာသိပ္ပံ (သစ်တောထွက်ပစ္စည်းပညာ) M.Sc. (Forest Products) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် – မဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို သိပ္ပံ(သစ်တောပညာ) ဘွဲ့ ရရှိပြီး သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများအားလုံး လျှောက်ထားတက်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။
Professors/Head of Department of Forestry, Yangon University
ဦးကြည် (1959 - 1966)
ဦးစိုးကြည် (1983 - 1991)
Rectors of UFES (1992 to present)